विक्सनरी:स्वशिक्षा/सम्पादन - विक्सनरी
केही सुरक्षित पृष्ठहरूमा बाहेक प्रत्येक पृष्ठमा एक "सम्पादन" ट्याब हुन्छ जसमा क्लिक गरेर तपाईं त्यस पृष्ठमा आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । यो सम्पादन गर्ने क्षमता नै विक्सनरीको सबैभन्दा असल गुण हो । तपाईंलाई हरेक पृष्ठमा सुधार गर्ने र त्यसमा तथ्य थप्ने अनुमति दिइन्छ । यदि तपाईं तथ्य हाल्नुहुन्छ भने कृपया त्यसको सन्दर्भ राख्न नभुल्नु होला, किनभने असान्दर्भिक तथ्यहरू हटाइन या चुनौतीमा पनि पर्न सक्छन्।
सम्पादन गर्ने अभ्यासको लागि प्रयोगस्थलमा गएर "सम्पादन" ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस । जब तपाईं "सम्पादन" ट्याबमा क्लिक गर्नुहुन्छ, एउटा सम्पादन झ्याल खुल्नेछ जसमा त्यस पृष्ठको मूलपाठ हुन्छ । त्यसमा केहि रमाईलो र ज्ञानबर्द्धक कुराहरू लेख्नुहोस्, या शब्दहरूलाई हटाएर आफ्नो पाठ लेख्नुहोस् । फेरि "संग्रह गर्ने"मा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्! अवलोकन गर्नुहोस् के हुन्छ!
अर्को कुरा, तपाईंलाई सधैं "पूर्वावलोक हेर्ने" बटनको प्रयोग गर्नु पर्छ। प्रयोगस्थलमा बदलाव गरेपछि "संग्रह गर्ने" बटनको भन्दा पहिला "पूर्वावलोकन हेर्ने" बटन थिच्नुहोस । अब यो तपाईंले त्यो कुरा देख्नु हुनेछ जो तपाईंले लेखसंग्रह गरेपछिको देखा पर्छ, तर तपाईंको परिवर्तन अहिले संग्रह गरिएको छैन । हामी सबै समय-समयमा गल्ति गर्दछौं, र पूर्वावलोकनका प्रयोगबाट हामी लेख संग्रह हुनु अघि आफ्ना गल्तीहरूलाई सुधार गरेर संग्रह गर्न सक्छौं । अँ, पूर्वावलोकन गरेपछि आफ्नो लेखलाई संग्रह गर्न नभुल्नुहोस्।
लेख संग्रह गर्ने[सम्पादन]
"https://ne.wiktionary.org/w/index.php?title=विक्सनरी:स्वशिक्षा/सम्पादन&oldid=33130" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १२:१५, २७ फेब्रुअरी २०१६ मा परिवर्तन गरिएको थियो।